As of Sun, 17 Nov, 2019 06:45
प्रमुख चाडपर्वहरूमध्येको दसैं पर्व चलिरहेको छ । भोलि फूलपाती हो र आजबाटै केही दिन दसैं मनाउनका लागि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाहेकका अन्य सरकारी कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू बन्द रहन्छन् । अध्ययन, जागिर, पेसा-व्यवसायलगायतका कार्यलाई केही दिन थाति राखेर हर्षोल्लासका साथ दसैं मनाउने गरिन्छ ।
दसैं महत्तम् महत्व बोकेको सांस्कृतिक पर्व भएकाले यसलाई विविध रूपले मनाउने गरिन्छ । खासगरी मान्यजन्यसँग टीका थापेर आशीर्वाद लिनु यस चाडको मुख्य विशेषता हो भने यससँगै नयाँ परिधान लगाउनु, मिष्ठान परिकारहरू खानु, पाहुना सत्कार गर्नु तथा घर रंगरोगन गर्नुका साथै घुमफिर गरिन्छ । आफ्नो गच्छेअनुसार दसैंको परख गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा केही व्यवसायीसँग ‘दसैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालगन्जको दसैंको आफ्नै विशेषता
सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हिन्दूहरूको महान् चाड दसैंको आफ्नै महत्व छ । खासगरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको यो पर्वमा एकआपसमा आफन्त मान्यजनसँग भेटघाट गर्ने, खुसी साटासाट गर्ने, आफूभन्दा ठूलासँग आशीर्वाद लिने, आपसी सद्भाव, भाइचारा र बन्धुत्व कायम गर्ने गरिन्छ । विशेषगरी हामी व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अरू समयभन्दा दसैंका बेला अलि बढी नै व्यस्त भइन्छ । विभिन्न व्यावसायिक तथा सामाजिक संघसंस्था, कार्यालयहरूले दसैंको अवसर पारेर शुभकामना आदान–प्रदान गर्नुका साथै बजार, सार्वजनिक मठ–मन्दिर, धार्मिकस्थल सरसफाइलगायत अनेक कार्यक्रम गर्ने भएकाले त्यस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने गर्छु ।
उद्योग वाणिज्य संघ आफैंले पनि प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीसँग दसैंको शुभकामना आदानप्रदानको कार्यक्रम राखेको छ । त्यसका साथै नेपालगन्जमा वर्षौं पहिलेदेखि ऐतिहासिक रामलीला मञ्चन गर्ने कार्यक्रम छ । जहाँ दैनिक हजारांैको संख्यामा दर्शकहरू सहभागी हुने गर्छन्, त्यहाँ सहभागिता जनाउने गर्छु । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट आत्मीयता बढ्नुका साथै व्यावसायिक एकतामा समेत बल पुग्ने गर्छ । दसैंको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम भए पनि त्यहाँ विभिन्न व्यवसायीका दु:ख, पीडा, गुनासाहरू पनि राख्ने र सुन्ने अवसर पाइने भएकाले दसैंले व्यावसायिक हित र एकताका लागि समेत अवसर जुराउने गर्छ ।
नेपालगन्जमा धेरै व्यवसायी विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूबाट आएर व्यवसाय गर्ने गर्छन् । दसैंको समयमा सबै व्यवसायीहरू आ–आफ्नो घरमा गएर सबै परिवार एकै ठाउँमा बसेर मनाउँछन् । हाम्रो पनि ठूलो परिवारका अधिंकाश सदस्य यतै भए पनि बुबाआमा, प्युठानमा भएकाले दसैंको समयमा बुबाआमालगायत गाउँघरका मान्यजनको हातबाट टीका लगाउन त्यहाँ गएर टीका ग्रहण गर्ने चलन छ । पूर्णिमासम्ममा प्युठानबाट नेपालगन्ज फर्केर चेलीबेटी र अन्य आफन्तजनलाई टीका लगाइदिने र आफूभन्दा ठूलासँग टीका ग्रहण गरेर दसैं सम्पन्न गर्ने गरेका छौं ।
नेपालगन्ज देशकै पुरानो ऐतिहासिक सहर भएकाले दसैंको यहाँ आफ्नै विशेषता छ । खासगरी विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृनि मान्ने मान्छेहरू यहाँ सामाजिक सद्भाव कायम गरेर यहाँ बसेका छन् । विभिन्न फरक धर्म मान्ने समुदायका व्यक्तिहरू पनि दसैं मनाउने गर्छन् । उनीहरू दसैंमा हिन्दूहरूको घरमा गएर टीका लगाउने, सँगै रमाउने गर्छन् । यस्ता धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम हुने क्रियाकलापमा हामी पनि सहभागी हुने गर्छाैं । यसरी दसैंको अवसरमा परिवारका सदस्यहरूसँग मात्र नभएर साथीभाइ, इष्टमित्र, व्यवसायी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, पत्रकार सबैसँग जमघट हुने अवसर मिल्छ । अन्त्यमा विजयादशमी, तिहार, छठलगायतका पर्वका अवसरमा सम्पूर्ण देशवासीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
खसीबोका नकाटिए हुन्थ्यो
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन
अरू बेला खासै फुर्सद हुँदैन । चाडबाडका बेला केही फुर्सदको समय निस्कन्छ । घरपरिवारसँग धेरै समय बिताउन पाइन्छ । पुराना साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ । पुराना यादहरूको सम्झना गरिन्छ । यसपालिको दसैंमा उपन्यास किनेर पढ्ने सोचमा छु । पुस्तक पसलबाट चर्चामा रहेका केही उपन्यास किन्दैछु । उपन्यासको स्वाद लिने रहर छ । हाम्रो परिवार शाकाहारी हो । दाइको परिवार पनि । खसी काट्ने योजना छैन । तर पनि पनिरका परिकार, मिठाइँ, सेलरोटी, काजुलगायत नै हाम्रो ‘स्पेसल’ खाना हुन्छ । ८५ वर्षको बुबाको हातबाट टीका ग्रहण गर्छौं । नजिकै ससुराली छ । आफन्तहरू पनि नारायणगढ क्षेत्रमै धेरै हुनुहुन्छ ।
यसपालिको दसैंमा चितवनमै हुन्छु । नारायणी नदी किनारमा बनाइएको लिंगेपिङमा खेल्छौँ । साथीभाइ बसेर रमाइलो गर्छौं । फूलपातीदेखि पूर्णिमासम्म बजार सुनसान जस्तै हुन्छ, तर परिवार, साथभाइसँग भेटघाट हुने भएकाले निकै रमाइलो लाग्छ । दसैंलगत्तै पारिवारिक भ्रमणमा दिल्ली जाने योजना छ । दुई छोरी छन् । अरू बेला घरमा समय दिन नसके पनि दसैंतिहारमा प्राय: परिवारसँगै हुन्छु ।
सिनर्जी एफएम, भरतपुर गार्डेन रिसोर्ट, गोर्खा रिसोर्ट, सिराइचुली रिसोर्टहरूमा व्यावसायिक लगानी छ । टाढा–टाढा घर भएका कर्मचारीलाई बिदा दिँदै आएका छौँ । नजिकै घर भएकाहरू आलोपालो काममा आउने वातावरण बनाएका छौँ । रेडियोमा पनि दसैंतिहारमा फोनकल, गीतसंगीतकै कार्यक्रम बढी सञ्चालन हुन्छन् । रेडियो, टेलिभिजन हेर्दै, सुन्दै बसिन्छ ।
दसैंमा खसीबोकाको बध धेरै हुँदा दु:ख लाग्छ । शाकाहारी धेरै हुने हो भने यो संस्कृति सुधार हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । दानदक्षिणा आफ्नो गच्छेअनुसार दिनु ठीकै हो । तर, ऋण खोजेर दक्षिणा दिनु गलत हो । पहिलेको जस्तो अहिलेको दसैंमा नारायणगढ बजारमा भीड छैन । गाउँघरमै पसल खुल्ने क्रम बढ्दो छ । बजार सुनसानजस्तै भए पनि परिवारसित बस्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ । बुधबार संघमा सामान्य शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरियो । पूर्णिमालगत्तै व्यावसायिक काममा फर्कन्छौँ ।
नाफा–नोक्सान बिर्सेर खुसीले दसैं मनाउँछु
मुक्तिनाथ प्रालि, सिमरा, बारा
म सारा कारोबार, व्यापार, नाफा–नोक्सान बिर्सन्छु फूलपातीदेखि । आफन्त, बडाहरूसँग वर्षभरि दुर्लभ हुने भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन्छु । यो समयले वर्षभरिको ऊर्जा दिने गर्छ मलाई । साथीभाइसँग भेटघाट, मनोरन्जन खानपिन बाक्लो हुने गर्छ यो समय मेरा लागि । काम त जिन्दगीभर नै गर्ने नै हो, तर उल्लासको यो पर्वलाई एक साता पूरै उमंगमा बिताउँदाको पलले सधैं पुनर्ताजगी गर्छ मेरो जीवनमा सायद । अरूले पनि यस्तै गर्दा हुन् ।
थोरै मासु, हल्का मद्यपान, खुलेर हाँसो र परिवारको चाहनामा केन्द्रित हुन्छ यो समय मेरो । संगीत त मन पराउँछु नै, तर यो समय यादगार संगीतमा आफूलाई प्रफुल्लित बनाउँछु । पिताजीको आशीर्वाद र उहाँको श्रमबाट सुरु भएको सानो हार्डवेयरबाट उद्योग सञ्चालनको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यसको श्रेय मातापिता नै हुन् । त्यसैले दसैंको आशिष नचुहियोस् भन्दै कामनासमेत गर्ने गरेको छु ।
दैवी शक्तिमा विश्वास राख्ने, म त्यही संस्कारबाट हुर्केको हुँदा दसैको महत्व बुझेको छु । म यो समयलाई व्यापारको समयभन्दा भिन्दै मनाउन रमाउँछु । आगामी योजना, उत्पादन, बजेट, बजार वित्तीयलगायतका विषयमा यो समय पनि लगाउने हो भने जीवन सार्थक बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । सबैको सोच पनि त एउटै हुँदैन ।
जीवनमा चाहना असीमित हुन्छन्, आवश्यकताको त पहाड नै बन्ने गर्छ, तर पनि धैर्य, कुशल व्यवस्थापन, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो त्यो । त्यही समयमै हुन जान्छ जति बेला पर्छ र सुन्दर अठोटले पूरा पनि हुन्छ हँुदै जान्छ मेरो अनुभव हो यो । भन्नैपर्ने हुन्छ, देशमा राजनीति गर्नेहरूसँग बुद्धि त छ नै, तर मति भएन, देवीको कृपा उनीहरूको यो विषयमा रहोस् ।
प्रस्तुति : प्रकाश लम्साल
परिवार, आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट गर्नेछु
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, प्रदेश–१
कतिपयले दसैंलाई विदेश र स्वदेशका पर्यटकीय स्थलहरू घुमेर मनाउने गरेका छन् । मेरो विचारचाहिं फरक छ । वर्ष दिनमा आउने बडादसैंमा घुम्न जानेभन्दा पनि घरपरिवार बसेर मनाउनु उत्तम हो । अरू बेला पनि घुम्दा हुन्छ । दसैं भनेको सधैं आउँदैन । वर्ष दिनमा आउने चाडलाई उमंगका साथ मनाउनुपर्छ । यसपटक मात्रै होइन, हरेक वर्षको दसैंमा परिवारका सदस्यहरू बसेर मनाउने गरेका छौं । आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने, दु:ख सुखका गफ गर्ने योजना छ । साथै वर्षभरि उद्योग र व्यवसाय आइपरेका समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा पनि परिवारसँग बसेर छलफल गरिन्छ । बडादसैंको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन भनेको विजयादशमी अर्थात् टीका हो । टीकाका दिन मान्यजनका गएर टीका र जमरासँगै आशीर्वाद ग्रहण गरिन्छ । हाम्रा धर्म, संस्कृति र परम्परालाई हामीले नै हो संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने । आज युवापुस्तामा धर्म, संस्कृतिसँगै परम्पराप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । युवा पुस्तालाई चाडबाडको महत्व बुझाउनुपर्छ ।
बाल्यकालमा खेलेको लिङ्गेपिङ खेल्नेछु
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
बडादसैं हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ । फूलपातीदेखि पूर्णिमासम्म विशेष महत्वका साथ दसैं मनाउने गरिन्छ । हुन त घटस्थापनादेखि नै दसैं सुरु हुन्छ । नवरात्रमा माता दुर्गाको पूजा आराधना गरिन्छ । मुख्य त दसैं भनेको आफन्त र साथीभाइ भेटघाट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । काम विशेषले टाढा–टाढा रहेका साथीभाइहरू दसैंमा घर फर्कन्छन् । विद्यालय र कलेज पढ्दाका साथीहरू विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । मेरो धेरै समय सुनसरीको चकलघट्टीमा बित्यो । त्यसो भएकाले दसैंमा पनि चकलघट्टी जानेछु । श्रीमती र छोराहरूसँग बसेर रमाइलो गर्नेछु । गाउँको दसैं धेरै रमाइलो हुन्छ । सहरमा त खासै लिङ्गेपिङ लगाइँदैन । चकलघट्टीमा गएर लिङ्गेपिङ खेल्नेछु । मलाई पिङ खेल्न मन पर्छ । यसरी पिङ खेल्दा केटाकेटीको याद आउँछ । केटाकेटीमा आफैं पिङ लगाउँथ्यौं । गाउँका घर–घर पुगेर टीका लगाउँथ्यौँ । केटाकेटी हुँदाको दसैंको रमाइलो बेग्लै थियो । गाउँमा गएर केटाकेटीमा मनाएको दसैंलाई ताजा बनाउनेछु । मान्यजनको घरमा गएर टीका र जमरासँगै आशीर्वाद ग्रहण गर्नेछु । घुम्नका लागि कतै जान्न । पुरानो घर, आफन्त र दाजुभाइहरू चकलघट्टीमा हुनुहुन्छ । त्यही भएर सुनसरीसम्म चाहिं जानेछु ।
मुक्तिनाथ र जोमसोम घुम्ने योजना छ
मारवाडी समुदायले पनि दसैंलाई विशेष रूपमा मनाउने गरेका छन् । मुख्य रूपमा मारवाडीले दीपावलीलाई भव्य रूपमा मनाउँछन् । तर, दसैं पनि मारवाडी समुदायले मनाउने गरेका छन् । मैले पनि हरेक वर्ष दसैंमा नवरात्रको पाठ गर्ने गरेको छु । परिवारका सदस्यसहित बसेर नवरात्रको नौ दिन नै माता दुर्गाको पूजा गर्ने गर्छाैं । नवरात्रको अन्तिम दिन दुर्गा माताको पूजालाई विसर्जन गर्दछौं । दसैंमा सबै कलकारखाला छुट्टी हुने भएकाले घुम्न जाने योजनामा छु । विगतका वर्षमा विदेश घुम्न जाने गरेको थिएँ । यसपटक चाहिँ नेपालकै पर्यटकीयस्थल घुम्न जाँदैछु । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । यसलाई सफल बनाउन हामी सबैको दायित्व पनि हो । हामी आफैंले नघुमी अरूलाई नेपाल घुम भन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसपटकको दसैंमा मुक्तिनाथ, जोमसोम, मुस्ताङलगायतका धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटकीयस्थल घुम्नेछु । आफूले घुमिसकेपछि अरूलाई नेपालका बारेमा भन्न सजिलो हुन्छ । तीन महिनाअघि मात्रै युके, अस्ट्रेलिया र युगोस्लाभिया घुमेर आएकाले विदेश नजाने निर्णयमा पुगेको हुँ । नेपालमा पनि घुम्नका लागि धेरै सुन्दर ठाउँ छन् । अरूलाई पनि म आग्रह गर्छु कि विदेशमात्रै होइन, स्वदेश पनि घुमौं, नेपाललाई बुझौं र विदेश जाँदा विदेशीलाई नेपालका बारेमा भनौं ।
दसैंलाई आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट गरेर सदुपयोग गर्नेछु
अध्यक्ष, इटहरी उद्योग वाणिज्य संघ, इटहरी
दसैंमा बाहिर गएका आफन्त, साथीभाइ पनि घर फर्किन्छन् । दसैंको बेग्लै विशेषता र महत्व छ । राष्ट्रिय पर्व पनि भएकाले सबै नेपालीमा दसैंमा उत्साह देखिन्छ । दसैंमा म कहिल्यै घर छाडेर घुम्न जान्न । घरपरिवारसँग बसेर रमाइलो गरेर दसैं मनाउने गरेको छु । यसपटक पनि घरपरिवारलाई नै समय दिने हो । अरू समयमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायसँगै संगठनको कामले व्यस्त रहने भएकाले परिवारलाई समय दिन सकिँदैन । दसैंमा सबै उद्योग, व्यापार बन्द हुन्छ । कार्यालयहरू पनि बन्द हुन्छ । परिवार, आफन्त र साथीभाइलाई समय दिने उपयुक्त अवसर पनि हो दसैं । कतिपय साथीभाइ र आफन्तसँग एक वर्षसम्म भेट भएको हुँदैन । कम्तीमा दसैंमा त भेट हुन्छ । साथीभाइसँग दु:ख सुखको गफ गरेर दसैंका परिकार खाएर मनाउने योजनामा छु । मान्यजनको घरमा गएर टीका र जमरा थाप्ने गरिन्छ । मुख्यतया दसैंलाई आफन्त र साथीभाइ भेटघाटकै अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने योजना बनाएको छु ।
दसैंमा पहिलाजस्तो उत्साह छैन
अध्यक्ष, गोयन्का सिमेन्ट-गोयन्का स्टिल
अहिले दसैं मात्र होइन, अरू चाडपर्वहरूमा पहिला–पहिलाको समयजस्तो उत्साह देखिँदैन र भएको पनि पाइएन । हुन त उमेर ढल्कँदै गएपछि पनि चाडपर्वप्रति उत्साह नदेखिएको हुन सक्छ । तर, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो बेलाको दसैं अनि बजार व्यवसायको कुरै भिन्दै हुन्थ्यो । दुई–तीन महिनादेखि नै अब दसैं आउन लाग्यो भन्ने भान सबैमा हुन्थ्यो । चंगा हुन्थे आकाशमा, पिङ देखिन्थ्यो धेरै । अहिले सबै हराइसके ।
त्यति बेला दसैं आउन यति बाँकी भनेर औँला गनेर बस्थे । तर, अब पहिलाको त्यो समय कहाँ पाउनु ? दसैं मात्र होइन, कुनै पनि पर्वमा रौनक भएको पाइँदैन, तर पनि चाडपर्वहरू आआफ्नो परम्परा, रीतिरिवाज, धर्म–संस्कृतिअनुसार मनाउनुपर्छ । हामीहरू पनि यो नौरथाको समयमा नवै दिन घरमा देवी माताको पूजाआजा गर्छौं । घरमा जमरा रोप्छौं । नित्य पूजा गर्छौं । नवमीको दिन कन्या पूजा गर्छौं । उनीहरूलाई दक्षिणा, उपहार दिन्छौँ । हाम्रो परिवारमा दसैंको टीका भने हुँदैन । दसैं अवधिभर सबै पूजा गर्छौं, तर घरमा दसैंको टीका लगाउने हाम्रो त्यस्तो चलन छैन, तर पनि हामी यो पर्वलाई श्रद्धापूर्वक लिन्छौं । मेरो श्रीमती, दुई भाइ छोरा र दुई छोरीको परिवार छ । दसैंमा टीका नलगाउने भएकाले पारिवारिक जमघट त्यस्तो हँुदैन ।
हामी उद्योगमा पनि दसैंभर पूजा गर्छौं । गोयन्का स्टिल उद्योगमा नौ दिन नै दुर्गा पूजा समारोह हुन्छ । त्यहाँ पनि कन्या पूजा, प्रसाद वितरणलगायतका कार्यक्रम हुन्छ । दसैंको समयमा कम्तीमा पनि ५ दिन उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण बन्द हुन्छ । वर्षमा सबैभन्दा लामो समय उद्योग बन्द हुने भनेकै दसैं पर्वमा हो । त्यसैले पनि यो पर्वको महत्व कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
उद्योगका कामदार, कर्मचारीबीच शुभकामना तथा उपहार आदानप्रदान कार्यक्रम गर्छौं ।
साथीभाइहरूसँग पर्वका बेला भेटघाट गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने नियमित प्रक्रिया हुन् । पहिला–पहिला शुभकामना कार्ड नै छापेर बाँढिन्थ्यो । अहिले सबै डिजिटलाइजेसन भयो, मोबाइल फोनबाट म्यासेज पठाउने, फेसबुकमा शुभकामना पोस्ट गर्ने, म्यासेन्जर, ह्वाटस एप, भाइबरबाट शुभकामना पठाउने गर्छाै । प्रत्यक्ष भेटेर या फोन गरी शुभकामना दिने पनि हुन्छ ।
अर्को मुख्य कुरा हाम्रो घरमा दसैंको टीका लगाउने प्रचलन नभए पनि म टीकाको दिन भैरहवा रहेको खण्डमा जहिले पनि मेरो आदरणीय दाइ समाजसेवी यदुनाथ सिलवालको घरमा गएर टीका, जमरा ग्रहण गर्ने गरेको छु, सिलवाल दाइलाई म निकै सम्मान गर्छु र उहाँको हातबाट टीका लगाउने गरेको छु ।
त्यसै गरी दसैंको समयमा कहिलेकाहीं बाहिर पनि जाने गरेको छु । हुन त उद्योगको कामले त्यति फुर्सद हुँदैन, तर दसैंमा ५ दिन जति उद्योग बन्द हुने भएकाले पनि यो पटकको बिदामा दिल्ली मेदान्ता गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको छु । म स्वास्थ्यप्रति अति सचेत छु । खानपिनमा ध्यान दिन्छु । यो चाडबाडमा हामी नेपालीहरूले खानपानमा बिशेष ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गर्छु ।
अब समय परिवर्तन भएको छ । उतिबेलाको चाडबाड मनाउने शैली कहाँ पाउनु ? व्यापार पनि पहिलाभन्दा धेरै खस्केको छ । उत्साह छैन पहिलाजस्तो तर उत्साहलाई मार्नु हुँदैन भन्छु म ।
आ–आफ्नो तरिकाले दसैं पर्व मनाउनुहुने सबैलाई विजया दशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु ।
दसैंमा स्वदेशमै रमाउने गर्छु
प्रबन्ध निर्देशक, बाग्मती चिनी मिल-सिद्धि विनायक एग्रो-जगत मोटर्स
अहिले दसैंलगायतका अन्य चाडपर्वहरू नासिँदै गएको जस्तो भान भएको छ । न्यू इएर इभ, भ्यालेन्टाइन डे, क्रिसमस, गुड फ्राइडेजस्ता विदेशी संस्कृति हाबी भएका छन्, हाम्रो चाडपर्वमाथि । अझ त्यसमाथि पनि सरकारले पर्बको बिदा काटेर जनतालाई पर्वदेखि टाढा राख्न खोजेको भान भइरहेको छ । त्यसैले विगतमा जस्तो उत्साह, रौनक दसैंलगायतका पर्वमा हुन छाड्यो । उतिबेलाको दसैंमा चंगा उडाउनेदेखि लिएर पिङ खेल्ने उत्साह हुन्थ्यो । अहिलेका पुस्ताले त अब चंगा र पिङ भनेको पनि बुझ्दैनन् । दसैंमा पहिला–पहिला टोलटोलमा सार्वजनिक रूपमा नाचगान हुन्थ्यो, रामलीला हुन्थयो, त्यो सबै हरायो । अहिले सार्वजनिक दुर्गापूजा भए पनि श्रद्धालुहरू खासै पुग्दैनन् । मन्दिरमा समेत उपस्थिति देखिँदैन । हाम्रा सांस्कृतिक पर्व नासिँदै गएको भान हुन थालेको छ ।
हुन त अब हामीलाई उमेरले पनि साथ नदिएर होला, तर पनि कता–कता मनले सोच्छ, यस्तै भयो भने हाम्रो पर्व, संस्कृति हराउने त होइन ?
अर्को कुरा, उद्योग, व्यापार, बजारमा पनि चहलपहल छ्रैन । जुन पहिला–पहिलाको समयमा उत्साह देखिन्थ्यो बजारमा त्यो सबै हराउँदै गएको छ । अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी पनि छ । केही वर्षदेखि बजारमा शून्यता देखिन्छ । चाडपर्व बढी व्यापार हुने समय हो । तर, खुसी हुन सकेका छैनन् साना–ठूला व्यवसायी कोही पनि । आममानिसको क्रयशक्ति पनि खस्कँदै गएकाले दसैंमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक नै हो, तर पनि ऋण काढेर भए पनि पर्व मनाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।
मेरो मन पर्ने पर्वमा दसैं पनि हो । यो वर्ष आमालाई गुमाउनुपरेकाले दसैं टीका छैन, तर पनि पारिवारिक मिलन, साथीभाइ भेटघाट, खानपिन भैहाल्छ । दसैं भनेको सबैलाई एकत्रित गराउने पर्व पनि हो मेरो विचारमा । देश–विदेशबाट आफन्त, साथीभाइहरू दसैंतिहार भन्दै स्वदेशमा आउँछन् । त्यसैले मेरो धारणा के छ भने दसैंमा हाम्रा आफन्त, साथीभाइहरू हामी भन्दै आउँछन्, तर हामी दसैंमा घुम्न जाने संस्कृति बनाउँछौ । मेरो विचारमा यो त्यति उपयुक्त होइन । म दसैंमा स्वदेशमै रमाउनुपर्छ भन्छु । घरमा पनि भन्न्ने गरेको छु । घुम्नका लागी दसैं पर्व नै किन रोज्नुप-यो र ? दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्व भनेको परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्रसँग मिलेर, रमेर मनाउने पर्व हो । विदेशबाट आफन्त, साथीभाइ हामी छौं भन्दै आउँछन्, तर हामी घुम्न गयौं भने उनीहरूको मनमा कस्तो पर्ला ? त्यसैले दसैंतिहारमा घुम्न जानु हुँदैन भन्छु म । यही हो, साथीभाइसँग भेटभाट, परिवार मिलन, रमाइलो गरी दसैं मनाउने गर्छौं । अर्को कुरा, उद्योग व्यवसायमा लागेको हुँदा आफूले मात्र होइन, उद्योगमा काम गर्ने कामदार, मजदुरहरूले पनि पर्व मनाउने वातावरण सिर्जना हामीले गर्नुपर्छ । पर्वका बेला उनीहरूलाई शुभकामना मात्र होइन, तलब, दसै पेस्की, उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो । जे होस्, दसैं पर्व मनाउने तरिका आआफ्नो हुन्छ, तर पर्व आयो भन्दैमा भड्किलो, समाजलाई नै अपाच्य हुने कुनै काम गर्नु हुँदैन । संस्कृति, धर्म बचाउने गरी पर्व मनाउनु पर्छ । जे होस्, दसैं भनेको आफूमात्र खुसी हुने नभई अरू पनि खुसी भएको, रमाइलो गरेको हेर्न पाइने पर्व हो । बिजया दशमीको सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा
स्थानीयको उजुरीले रोकियो सडक स्तरोन्नती
मर्दी खोला खानेपानी आयोजना समयमा नै सक्न निर्देशन
पुल बनाउन २० करोड बिनियोजन
लमजुङमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव
ऊर्जा बचत कार्य गरेबापत शिवम् सिमेन्टलाई अनुदान
मुक्तिनाथ विकास बैंक र ट्रयांगकुलिटी स्पाबीच सहकार्य